Inavisceral modern thriller from the director of Lone Survivor, Mark Wahlberg stars as James Silva, an operative of the CIA’s most highly-prized and least understood unit. Aided byatop-secret tactical command team, Silva must retrieve and transport an asset who holds life-threatening information to Mile 22 for extraction before the enemy closes in.
Lauren Cohan, Mark Wahlberg, John Malkovich
ဒါရိုက်တာ Peter Berg
စုံထောက် Sherlock Gnomes နဲ့ သူ့လက်ထောက်တို့ Gnome Watson ပိုင်တဲ့ တခြား ပန်းခြံမှာ ကြုံနေရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို Gnomeo နဲ့ Juliet တို့ရဲ့ အကူအညီတောင်းချက်အရ စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
Ralph Breaks the Internet (Wreck It Ralph 2)
Walt Disney Animation Studios ကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 3D animation ကာတွန်းကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီိ လူမင်း၊ ရာဇာနေ၀င်း၊ အကယ်ဒမီိ ထွန်းထွန်း၊ အကယ်ဒမီိ စိုးမြတ်သူဇာ၊ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း အပြင် သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားထဲမှာ “ကိုကိုငလက်မ” အဖြစ် အကယ်ဒမီိ လူမင်း ကို ထူးထူးခြားခြား မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Hotel Transylvania (3) ရုံတင်ပြီဆို ကြည့်ကြမယ်မို့လား? (1) နဲ့ (2) ကလဲ ကလေးလူကြီးအားလုံး သဘောကျလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ကာတွန်းကားလေးဖြစ်ခဲ့တာပဲလေနော် ။
၁၉၈၇ ခုနှစ် ကယ်လီဖိုးနီးယား ကသေးငယ်တဲ့ ကမ်းစပ်မြို့လေးရဲ့ ပစ္စည်းဟောင်းတွေ စွန့်ပစ်တဲ့နေရာမှာ Bumblebee ခိုလှုံနေထိုင်နေစဉ် ....
Johnny English Strike Again (2018)